Accueil > Gazetin'ny nosy > Praiminisitra Mahafaly Olivier: Nirahin’ny filoha Hery R. nanala-bara-tena indray
Praiminisitra Mahafaly Olivier: Nirahin’ny filoha Hery R. nanala-bara-tena indray
Sanatriavin’ny vava ve dia efa tsy manam-pidiny intsony ny Praiminisitra Mahafaly Olivier Solonanadrasana fa izay anirahan-dRajaonarimampianina filohampirenena azy dia tsy maintsy alehany satria izay no baiko ary izay no takalon’ny tsy mbola hanesorana azy amin’ny toerany ?
Nalefa niazo an’i Taolagnaro indray mantsy ny Praiminisitra omaly nandeha nankahery sy nitondra fampiononana ho an’ny havan’ireo niharam-boina vokatry ny lozam-pifamoivoizana tany. Loza izay nitranga tamin’ny faha-24 desambra teo.
Ho an’ny mpanara-maso maro dia fahafaham-baraka ho an’Ingahy Praiminisitra iny dia omaly iny satria tsikaritra ny maro fa tsy mba nisy hetsika nataon’ny fitondram-panjakana tamin’ilay loza nitranga tany Ikongo ka nahafatesan’ireo mpitandro ny filaminana nalefa hanatevin-daharana an’ireo hamerina ny fandriam-pahalemana tany, herinandro vitsy lasa izay.
Tena mampalahelo mihitsy ny mahazo an’Ingahy Praiminisitra satria avezivezin’ny eny Mavoloha toy ny firaka atakalo.
Nirahina nidina nijery ny vidim-bary teny amin’ny tsenan’Anosibe izy, tapa-bolana lasa izay, dia nanaovan’ny sasany sinema, ka mody nalefa nitobaka ny vary mba ho fanaporofoana fa nisy akony ilay fidinan’ny Praiminisitra teny, nefa ry zalahy ao an-dapa ihany no milalao an’io vidim-bary io, hoy ny maro. Tsy tokony hadinoina fa ankoatra ny fifandraisan-tendron-dry zalahy manam-pahefana ambony sasany ireeo amin’ireo vahiny karana mpanafatra vary dia izy ireo koa no milalao an’io vary io satria mpiara-dia hatry ny ela tany Alaotra tany tamin’ny raharaham-bary ry zareo ireo. Isan’izany, ohatra i Rivo Rakotovao, ny Governoran’ny Banky Foibe, Ingahy Ralison Alphonse izay tandapa mody mangingina koa, ary ny filohampirenena dia isan’ny mpiara-niasa akaiky tamin-dry zalahy mpandraharahan’ny vary tany alaotra tamin’ny maha- « expert comptable » azy, izay misy fifamatorana matotra mihitsy hatramin’izao.